ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းက ရေယာဉ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းက ရေယာဉ်များ
Posted by weiwei on Feb 5, 2012 in Local Guides, Photography | 25 comments
wei's photos ရန်ကုန်မြစ်
ဒီနေ့ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုဘက်သွားရင်း ရန်ကုန်မြစ်မြင်ကွင်းတစ်ချို့ကို မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပါတယ် … မြင်ကွင်းတစ်မျိုးဆန်းသစ်စေတဲ့ သင်္ဘောလေးများနဲ့ သဗ္ဗာန်များကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ပါ …
ရွှေတိဂုံဘုရားကို မြစ်ထဲမှ ဖူးမြင်ရပုံ
မြစ်ထဲမှာ မြင်ရသော ရန်ကုန်မြင်ကွင်း
မြစ်ထဲက ဖူးမြင်ရတဲ့ ရွှေတိဂုံ
မြစ်လယ်မှ ရပ်ထားပုံက အဆန်းပဲ ...
နံပါတ် ၁ ပုံကို ပိုပြီးတော့ သဘောကျပါတယ်… ဘုရားကို မြင်ကွင်း တစ်မျိုးကနေ ဖူးရတော့ တစ်မျိုးလေးပါပဲ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဆက်ရိုက်ပါ. အားပေးသွားပါတယ်။
စကားမစပ် mandalaygazettemembers@im.partych.at ကို Add ပေးကြပါလား၊ လူစုပြီးတော့ ပွါးရအောင်လို့ပါ…Google Talk မှာ Add ရမှာပါ..
တကယ်တော့ ရန်ကုန်ရဲ့မွန်းကျပ်မှု့က အမြန်ဆုံးရှောင်ထွက်နိုင်တဲ့နည်းက
မြစ်ကူးတဲ့ မြစ်ထဲသွားတဲ့ သင်္ဘောစီးလိုက်တာပဲ။
ဖြစ်နိုင်ရင် မြစ်ကြောင်းအတိုင်းသွားတဲ့ အပန်းဖြေခရီးစဉ်မျိုး
အခုဟာက ပြည်တွင်းခရီးသွားချင်ရင် ဘုရားဖူးခရီးစဉ်တွေပဲရှိတော့
ရုံးပြန်တက်ရင် မျက်တွင်းလေးဟောက်ပက်နဲ့ ပျော့ခွေ..လို့ ……။
မှန်တာပြောမယ်နော် ၊ စိတ်မဆိုးပါနှင့် ။
ရန်ကုန် မြစ်ပြင်က ရွံ့ရောင်ရှိပြီး ညစ်ပါတ်တယ် ၊
ရှုခင်းတွေကလည်း မလှဘူး ။
နိုင်ငံတကာကို လှည့်လည်ဖူးပြီး ၊
လှတယ်ဆိုတာပေါင်း များစွာကို တွေ့ခဲ့ဘူးတော့ ၊
ရန်ကုန် မြစ်ရှုခင်းတွေက ရင်ထဲကို လာမထိဘူး ။
ဦးဖောပြောသလိုပဲ ရန်ကုန်မြစ်က မလှဘူး …
ဒါပေမယ့် ဆန်းတာတော့အမှန်ပဲ .. ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ တွေ့ရမှာမဟုတ်တဲ့ ရေယာဉ်အဟောင်းတွေနဲ့ မြစ်ရေခပ်နောက်နောက်က နိုင်ငံခြားသားတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တယ် … တိုက်တာမြင့်မြင့်တွေ မတွေ့ရတဲ့ ရန်ကုန်မြစ်ကွင်းကလဲ တစ်မျိုးလေးပါပဲ ….
ဦးပါလေရာရေ … river cruise တွေက ရှိတော့ရှိပေမယ့် နိုင်ငံခြားသားလောက်သာ စီးနိုင်ကြလောက်အောင် ဈေးကြီးနေသေးတယ် …
ရေလမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးစံနစ်မရှိလို့ အန္တရာယ်လဲ မကင်းလှပါဘူး။
အခုtourist တွေအတွက်ထားတဲ့ Road To Mandalay လို river cruise တချို့ရှိပေမယ့်၊ အဲဒါက မြစ်ထဲတညအိပ်မောင်းရုံပဲ ။ ကျွန်တော့အမြင်တော့ သိပ်အရသာမရှိလှဘူး။
ဦးဦးပါလေရာလိုပဲ ကျွန်မလဲ စိတ်ကူးယဉ်ထားသေးတယ် ..
road to mandalay လို အပျော်စီးတွေက စရိတ်စကများလွန်းတော့ ခရီးရှည်မစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူး …. ရေစူးကလဲ နဲနဲများနေလို့ တစ်ချို့မြစ်ကျဉ်းတွေကိုလဲ မဖြတ်နိုင်ဘူး ..
အခုနောက်ပိုင်း ပေ ၁၀၀ လောက်နဲ့ ရေစူး ၂ ပေ လောက်ပဲ ရှိတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောငယ်လေးတွေနဲ့ စင်းလုံးငှားစနစ်နဲ့ ရက်ရှည်ငှားသွားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုရင် အကျိုးအမြတ်ရှိနိုင်တယ် …
ဦးဦးပါလေရာ စိတ်ဝင်စားရင် လုပ်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးချင်တယ် …
ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကတော့ဒီရေပြင်ကိုဘာထင်လဲတော့မသိဘူး။ ကူးလို့ရလားမေးပြီးရတယ်လဲဆိုရောကျကျနနကိုကူးသွားသေးတယ်။ ကနေဒီယန်းတယောက်ပါ။
ကျမလည်း ဒလသွားတိုင်း အဲဒီလို တွေးခဲ့ပါတယ်။
မြစ်ဆုံကိစ္စနောက်ပိုင်းမှ ဒီမြစ်ကြီးတွေကနေပေးတဲ့ မြေဆီမြေနှစ်တွေကို ကျမတို့ စားသုံးနေရတာပါလားလို့ စိတ်ပြောင်းသွားတယ်။
မိုးမှာ တွေ့ရတဲ့ ဧရာဝတီလည်း ဒီလို အင်အားထန်ထန် စီးဆင်းနေတာမျိုးပါ။
ကြည်လင်အေးမြပေမယ့် (အောက်မှာ) ကျောက်စိုင်ကျောက်ခဲ အသဲနှလုံး
ဝါရွှေနောက်ကျိပေမယ့် မြေနုမြေဆီနဲ့ နွေးထွေးတဲ့ အသဲနှလုံး
(လူ့ပယောဂမကင်းတဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းကို ထည့်မတွက်ရင်ပေါ့လေ။)
မြစ်ရေက.. နှုန်းတွေနဲ့နောက်နေတာ.. အမြဲပဲလို့.. မှတ်မိတယ်..။
အဲဒီရေကို ဓါတ်ခွဲခန်းပို့ပြီး.. ပါတဲ့အမျိုးအစားတွေစာရင်း… သေသေချာချာထုတ်ပြန်ပေးချင်သား..
ရန်ကုန်မြစ်ထဲ.. စပိဘုတ်လေးတွေကို.. နာရီနဲ့ တိုးရစ်တွေငှားစားတဲ့အလုပ် ရှိသလားသိချင်သားး။
တိုးရစ်တွေကို.. တားဂက်ထားလုပ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့..။ အနောက်နိုင်ငံသားတွေက.. အဲဒါမျိုးအရမ်းကြိုက်တာ…။
ယူအက်စ်မှာ.. တချို့ပင်လယ်ကမ်း..မြစ်ကမ်းတွေမှာ.. ဘုတ်တွေ.. ငှားစားလေ့ရှိတယ်.။
အသေးဆုံးလေးဆိုရင်တောင်.. တနာရီ ၇၅ဒေါ်လာ…။
သွားမောင်းဖူးတယ်..။ အင်မတန်စိတ်ကြည်စေပြီး..အပန်းလည်းပြေတဲ့.. ပျော်စရာလို့ထင်မိတယ်….။
ဝေဝေရေ – တကယ်ကြီးကို အရမ်းလွမ်းပါတယ်။
ရန်ကုန်မြစ်တွင်း ကို ဘယ်လို ခရီးဆန့် ခဲ့တယ် ဆိုတာလဲ ရေးပါဦး။
သူကြီးပြောသလို စပိဘုတ်လေးတွေက ချင်းတွင်းနဲ့ ဧရာဝတီဘက်မှာ အများကြီးရှိပါတယ် … ရန်ကုန်မှာကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကိုသွားတဲ့ စပိဘုတ်တွေရှိတယ် ….
အရီးလတ်ရေ … ခရီးဆန့်ခဲ့တာက ရိုးရိုးစက်လှေလေးနဲ့ ၀ါးတန်းကနေ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုဘက်ကို အသွားအပြန်လောက်ပါပဲ … စုစုပေါင်း နာရီဝက်လောက်ပဲ ကြာမှာပါ … သွားဖြစ်နေကျခရီးစဉ်လေးပါပဲ …. အမြင်ဆန်းတယ်ထင်လို့ ဒီတစ်ခေါက် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ရှယ်ယာပေးလိုက်တာ ….
မဝေ ၀ယ်မယ်လေ ဈေးမေးထားလိုက်
မဝေ တင်မှ ဧရာဝတီမြစ်ထဲကလှေတွေသင်္ဘောတွေကိုတင်ချင်စိတ်ပေါက်သွားပြီ
မြစ်ထဲမှာ မြင်ရတဲ့ ရန်ကုန်မြင်ကွင်း ဆိုတဲ့ ပုံလေးက
လှေတပ်ကြီး ချီတက်လာသလို ထင်ရတယ်ဗျ။
သူများရေပြင်လို ပြာသွားအောင် မဲနယ်လိုက်ဖြူးရင်ကောင်းမလားသိဘူး…
လှေတွေကိုထင်းစိုက်ပစ်ပြီး နာတို့ သဂျီးပြောသလို စပိဘုတ်တွေ ထားကွာ
အလှတရားကို သဘာဝလေးနဲ့ ဖော်ညွှန်းတာ
ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာ နဂါးကြီးတကောင်ရှိတယ်။ သူ့အသားက ရွှံရောင်မို့ မြစ်ရေကလည်း ရွှံ့ရောင်ပေါက်နေရတယ်။ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရဘူး…။ သဂျီးလည်း အရင်ဘဝက မိစ္ဆာဒိဠိ ဘီလူးကြီး..။ ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတပါးက နှိပ်ကွပ်လိုက်လို့ မာလကီးယပြီး လူဖြစ်လာတော့ သူ့စရိုက် ပြင်လို့မရဘူး…။
မမဝေရေ ပုံလေးတွေက လှပါတယ်။မြစ်တွင်းက အလှပေါ့။ဒီပုံတွေကို တင်တော့ အရွယ်အစားကို
ဘယ်လောက်ရွေးလဲဟင်။ကျနော်ကတင်တိုင်းမှာ medium ကိုရွေးတာသိပ်အဆင်မပြေဘူးထင်လို့ ပါ။
ပုံတွေကို ကင်မရာထဲကအတိုင်းမတင်ပဲ ဆိုဒ်နဲနဲချုံ့ရပါတယ် … ပြီးတော့မှ large size နဲ့တင်ပါတယ် …
သင်္ဘောတစ်စီး သီလ၀ါ ဆိပ်ကမ်းကိုဝင်ရောက်လာတယ် အဲဒီသင်္ဘောပေါ်မှာ မြန်မာသင်္ဘောသား တယောက်နဲ့ အာရှ နိုင်ငံစုံက သင်္ဘောသားတွေလဲပါတယ်……တခြားသင်္ဘောသားတွေက မြန်မာသင်္ဘောသားကို ပြောတယ် ငါတို့အားလုံး ကမ္ဘာပတ်လာတာ
တွေ့မိတဲ့ ရေတွေက ကြည်လင်သန့်ရှင်းနေတယ်… မင်းတို့နိုင်ငံရောက်မှ ရေတွေကညစ်ပတ်နေတယ်တဲ့ နိပ်ကွတ်ပါလေရော
မြန်မာသင်္ဘောသားကလဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ် ငါတို့ နိုင်ငံကို ရွှေနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ် လူမျိုးဆိုရင်လဲ ရွှေ လို့ပဲခေါ်တယ်
ရေ လဲသူများနဲ့မတူတဲ့ ရွှေရောင် ဖြစ်နေတာလို့ စကားနိင် ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ …:P (တကယ်ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ)
ဒီသင်းဘောတွေနဲ့မြစ်ကြောင်းကိုမြင်တော့ ငယ်ငယ်တုံးက ညောင်တုန်း ပန်းတနော် မအူပင် ကိုသွားခဲ့တာတွေ ပြန်သတိရမိပြန်ရော ရှူခင်းတွေကသာယာပါရဲ့ဗျာ ရေအရောင်ကတော့ ရေအရောင်ပေါ့
ဟိုးးးးးး အရင်ကဆိုရင် အဲဒီလို မြစ်ကြောင်းခရီးကိုပဲ အားကိုးပြီး ခရီးသွားခဲ့ရတာ။
လမ်းတစ်လျှောက်လုံး တစ်မြို့ပြီး တစ်မြို့ကပ်လိုက်၊ မုန့်သည်တွေက ဒေသအလိုက် မုန့်မျိုးစုံလာရောင်းတာတွေ ၀ယ်စားလိုက်နဲ့ ပျော်ဖို့လည်း ကောင်းတယ်။
ဒါ့အပြင် လူနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကျပ်ညှပ်ပြီး ညစ်ပတ်နံစော်နေတာ၊ အသံဗလံပေါင်းစုံနဲ့ ဆူညံနေတာတွေကတော့ တော်တော်စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။
အပျော်စီးသင်္ဘော Love boat လိုမျိုး စီးရရင်တော့ တမျိုးပေ့ါနော်။
မဝေ ရဲ့ မြစ်ပြင်နဲ့ သင်္ဘောတွေ မြင်တော့ ငယ်ငယ်က ဧရာဝတီတိုင်းဘက်တွေကို ခရီးထွက်ရင် သင်္ဘောအကြာကြီး စီးခဲ့ရတာတွေကိုသတိရမိတယ်။
တွံတေးတူးမြောင်းနားမှာ ထမင်းလိုက်ရောင်းတဲ့ လှေကလေးတွေနဲ့ လိုက်ရောင်းသူတွေက ရောင်းကြတယ်။
အဲဒီတုန်းက အလွန်ဆုံး ရှိလှ.. ၇နှစ် ၈နှစ် ဆိုတော့.. ထမင်းထုတ် ဘယ်ဈေးလဲတော့ မသိဘူး..
ထမင်းထုတ်ကို ၀က်သားနဲ့ ကြက်သားနဲ့ အမျိုးမျိုးပေါ့..
ထမင်းကို ကြာဖက်နဲ့ ထုတ်ထားပြီးတော့ အပေါ်က ၀က်သားဟင်း ၂တုံးလောက်လို့ ထင်တယ်။ ငပိရည် မွှေးမွှေးလေး ဆန်းပေးပြီးတော့ တို့စရာ နည်းနည်းနဲ့ ထုတ်ပေးတာ..
ထမင်းကို ဟင်းအနှစ်နဲ့နယ်ဖတ် စားလိုက်ရင် သိပ်စားကောင်းတာပဲ… အဲဒီ လက်ရာမျိုး မစားရတာ ကြာခဲ့ပြီ။ ထမင်းကို ကြာဖက်နဲ့ ထုတ်တာလည်း အရသာ တမျိုး ဖြစ်စေတယ်။